Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo shir caalami ah maanta uga qeybgalayo dalka Ruushka. - XAL DOON
Home NEWS Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo shir caalami ah maanta uga qeybgalayo dalka...
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo shir caalami ah maanta uga qeybgalayo dalka Ruushka.
Dowladda Soomaaliya ayaa ka qeybgaleysa Shirweynihii 5-aad ee Madasha Iskaashiga ee Dowladaha Carabta iyo Ruushka, kaasoo sida qorshuhu yahay maanta oo Talaada ah ka furmayo magaalada Caasimada ah ee Mosco.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, ayaa l hoggaamiya wafdiga ka socda dowladda Soomaaliya ee shirka xaadiray, iyagooo ku soo bandhigi doono talooyinkooda la xiriira sida ay u wada shaqeyn karaan dowladaha Carabta iyo tan Ruushka.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Vladimirovich Putin ayaa la filayaa inuu shirka si rasmi ah u furo, isagoo warbixin ka siinaya madaxda wadamada Carabta sida dowladiisa ay uga go’antahay iney wanaajiso xiriirka dalalka Carabta.
Si kastaba, Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Soomaaliya ayaa gaaray duhurnimadii shhalay Magaalada Moscow si uu uga qeybgalo Shirka heer Wasiir arrimo dibadeed ee meertada shanaad ee Madasha Iskaashiga Ruushka iyo Carabta oo furmi doona maanta oo Talaado ah (16 April).
Wasiir Cawad waxa uu isla shalayba la kulmay dhiggiisa Ruushka Sergey Lavrov waxeyna ka wada hadleen siyaabaha lagu xoojin karo xiriirka laba geesoodka iyo iskaashiga, sidoo kale waxa ay isla eegeen dhowr arrimood oo heer gobol iyo caalami ah oo wallaac leh.
Safaarada Soomaaliya ee magaalada Mosco oo la soo gaarsiiyay dhambaalka Casuumaada todobaadkii hore ayaa sheegtay iney aqbaleen ka qeybgalka, iyadoo ay noqoneyso markii 2-aad oo ay ka qeybgalaan shirkan, waxaana kii hore ee 4-aad sanadkii 2017 lagu qabtay dalka Imaaraadka Carabta.